I-Dax yaseJamani ihlasela ngo-Epreli 16 ukuphakama
Ukuhlaziywa: 18 May 2021
Inkcaso ephambili: 15535
Inkxaso ephambili: 15355 - 15250
I-Dax yaseJamani ihlanganise iipesenti ezintlanu ukusukela oko yehla nge-5 ngasekupheleni kweveki ephelileyo kwaye ngoku iphinda ibuye ibuye i-14820 ka-Epreli (lonke ixesha liphezulu) ngelixa isaphula ulwakhiwo lwexesha elifutshane kunye neveki ephelileyo.
Ixesha lokugqibela iDax ithengise kula manqanaba yehla nge-4.56% (710 pips) kwinqanaba le-14900.
Ngexesha elifutshane, iithagethi eziqhubayo ziye zabethwa kwi-1.618 yomlenze wokugqibela ezantsi kwaye kuprintwa ikhandlela le-1H ye-bearish egubungele amakhandlela e-6 1H edlulileyo.
Ngokwembali, sibonile ukwehla okuninzi ngaphambili kuwo onke amaxesha aphezulu ukusuka kwi-4% ukuya kwi-15%.
Siza kujonga kwaye silawule olu rhwebo ngokukhawuleza ukuba ukuthengwa kwevolumu kufunyenwe.
IJamani 30 (DE30EUR) ibuyela umva kodwa ingafumana inkxaso ephezulu yeNqanaba 13912.50
Ukuhlaziywa: 9 Februwari 2021
Imimandla ephambili yokuHamba15000, 15200, 15600
IJamani 30 (DE30EUR) yexesha elide iTrend: Bullish
IJamani i-30 ibuyela kwinqanaba le-13400. Emva kokuphinda kubuyiselwe endaweni, uptrend uya kuqhubeka kwakhona. Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka kwaye sifike kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-14428.0. Isibane sesibane sibonisa umsonto omde, uchaza ukwaliwa.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-59 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo kwisithuba sexesha se-14. Ibonisa ukuba ikummandla wonyuselo-ntla ongaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
IJamani 30 (DE30EUR) Ixesha eliphakathi kwiTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-2, isalathiso kukuhla. NgoFebruwari 2 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-DE30EUR iya kuwa kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions. Lelona zantsi le-13912.50.
I-DE30EUR-2 Itshathi yeYure
Iimarike zingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-bearish umfutho. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-DE30EUR ikwi-uptrend kodwa ibuyela umva. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka xa isalathiso sifumana inkxaso. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iyakwehla iye kwinqanaba le-13912.50.
IJamani 30 (DE30EUR) ibuyela kwinqanaba elikwi-13400, iphinde iqale kwakhona kwi-Uptrend entsha
Ukuhlaziywa: 1 Februwari 2021
Iindawo eziManyeneyo zokuNgqinisisa: 15000, 15200, 15600
IJamani i-30 inyukele phezulu emva kokubuyela kwinqanaba elingu-13400. Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka kwaye sifike kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-14428.0. Iimarike ziya kuguquka kwi-1.272 Fibonacci extensions kwaye ibuyele kwinqanaba le-78.6%.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso siye sehla saya kwinqanaba lama-49 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kubonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwi-rally. NgoFebruwari 1 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-DE30EUR iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci. Yiyo ephezulu ye-13726.70.
I-DE30EUR-1 Itshathi yeYure
1Itshathi yeeMpawu Ukufunda
Iimarike zingaphezulu kwe-80% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-bullish umfutho kwaye sikummandla ogqithisileyo. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-DE30EUR inyukele phezulu. Imakethi ngaphambili iwele kwinqanaba le-13400 kwaye yaqala kwakhona ukunyuka okuphezulu. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-14428 kwaye ibuye umva.
IJamani 30 (DE30EUR) Uptrend ujongene nomsebenzi wokuphakamisa inqanaba le-14000
Iindawo eziKhuselekileyo: 12800, 13200, 13600
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 11600, 11200, 10800
Jamani 30 okwangoku inyuka phezulu. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-14000. Nge-18 kaJanuwari, umzimba wekhandlela obuyileyo wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kuphakama kwaye sifike kwinqanaba le-2.0 Fibonacci ulwandiso. Eli linqanaba eliphezulu le-14549.60.
I-DE30EUR kungoku nje ikwinqanaba lama-54 leSalathiso saMandla aMandla aHlukeneyo ixesha lesalathiso 14. Isalathiso sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgca osembindini wama-50. Oku kuthetha ukuba isalathiso siyenyuka. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa ukuba phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sihamba kwicala elingaphantsi kwinqanaba le-14000. Ngomhla kaJanuwari 19 ukunyusa phezulu, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywe inqanaba lokubuyisela i-Fibonacci eyi-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kuphakama kwaye sifike kwinqanaba le-2.0 Fibonacci ulwandiso. Eli linqanaba eliphezulu le-14225.50.
I-DE30EUR -4 Itshathi yeYure
IJamani i-30 okwangoku ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ixabiso libuyela umva kwingingqi ethengiweyo. Abathengisi banokuthi bavele kwindawo ethengiweyo. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
IJamani 30 ngoku ikwiimarike zeenkomo. Isalathiso silungiselela ukunyuka okunyukayo ukuba iinkunzi zeenkomo zaphula inqanaba le-14000. Isalathiso sinokunyuka njengoko iinkunzi zeenkomo ziqhekeza ngaphezulu kwee-SMAs. Ukunyuka okwangoku okwangoku kunokwenzeka ukufikelela kwinqanaba le-14225.50.
IJamani 30 (DE30EUR) Iqala kwakhona kwi-Uptrend Emva kweNqanaba lokuFakwa kwabaNcinci kwi-13750
Ukuhlaziywa: 19 January 2021
Iindawo eziManyeneyo zokuNgqinisisa: 13600, 14000, 14400
Imimandla yenkxaso ephambili11200, 10800, 10400
IJamani i-30 inyukele phezulu. Ukunyuka okuphezulu kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-14011 kwaye kubuyiswe umva. Isalathiso sibuyele umva ngaphezulu kwenkxaso yeentsuku ezingama-21 ze-SMA kwaye iphinde yaqala kwakhona.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso siwele kwinqanaba lama-63 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo sexesha lesi-14. Oku kubonisa ukuba sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikukunyuka okuphezulu. NgoJanuwari 8 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DE30EUR iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Oko kukuphakama kwe-14473.10.
4-Itshathi Izalathisi Ukufunda
Iimarike zingaphezulu kwe-30% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-bullish umfutho. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-DE30EUR inyukele phezulu. Isalathiso siwele kumgangatho ophantsi we-13660 kwaye saphinda saqala ukuya phezulu. Ngokuya kuhlalutyo lwezixhobo zeFibonacci, isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-14473.10.
I-DAX isebenza ngokukuko njengoMngcipheko weNtengiso
Izitokhwe zaseJamani zathengisa ngaphezulu ngoLwesine, njengoko ezothutho kunye noLungiselelo, amaShishini, kunye necandelo leMithombo yeendaba zibone inzuzo ebalulekileyo. Ekupheleni kwentengiso izolo (ixesha laseFrankfurt), i-DE30EUR (i-DAX) ikhule malunga ne-0.4%, ngelixa i-MDAX kunye ne-TecDAX behlanganisene nge-0.87% kunye ne-0.08% ngokwahlukeneyo.
Abona badlali baqhube kakuhle phantsi kwe-DAX yayiyiVolkswagen (DE: VOW3), ethe yavela nge-4.5%. I-Deutsche Bank AG (DE: DBK) ikhule nge-4.1%, ngelixa i-MTU Aero Injini (DE: MTX) inyuke nge-3.16%.
Ngeli xesha, abona bantu baqhube kakubi kule seshoni yi-Infineon Technologies AG (DE: IFX), eye yehla nge-1.5%. I-SAP SE (DE: SAPG) yehle nge-1.22%, ngelixa i-Deutsche Boerse AG (DE: DB1G) igqibe usuku nge -1.1%.
Lilonke, ukunyuka kwamasheya kwakudlula amanani abo behla eFrankfurt Stock Exchange ngama-438 ukuya kuma-241, ngelixa ama-31 engatshintshanga.
Okwangoku, isalathiso se-DAX volatility index (V1XI) -esigcina imeko yokunganyamezeleki kwe-DAX-yehle nge-8% ukuya kwi-21.37, iinyanga ezintandathu eziphantsi.
Kwezinye iindaba, u-Mongameli-onyuliweyo u-Joe Biden ukhankanye i-1.9 yezigidigidi zeedola ukuxhasa uqoqosho lwase-US, enye yezona zinto zibi kakhulu kubhubhane we-COVID-19. Esi sibhengezo besiyinto ebalulekileyo exhasa ii-asethi zomngcipheko kunye nezalathiso, njenge-DAX, kule veki.
UPaul Donovan, uQoqosho oluPhezulu kwi-USD Global Wealth Management, ucacisile kwi-podcast ukuba "Ngokwenyani, iyakuba sisikhuthazi esihlasela ikota yesibini, kunokuba ibe yeyokuqala, njengoko iCongress ingazukuyiphumeza kwangoko, kwaye ngokuqinisekileyo ayinakuphumelela izindululo njengoko zimi njalo."
UDonavan uqaphele ukuba inkxaso yeDemokhrasi eyongezelelweyo kurhulumente kunye noncedo kurhulumente wengingqi kunye nokunyuka komvuzo omncinci zombini zinokubangela inkcaso enamandla evela kwiiRephabliki zeSenator.
Ukwahlulwa okungama-50-50 kwigumbi eliphezulu kunokubhengeza ezinye zeepakeji kubantu abenza iifilimu ngaphandle kokuba kunokufunyanwa inkxaso ye-bipartisan yomthetho oyilwayo. Nangona kunjalo, isivumelwano se-bartartisan ngalo mzuzu kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba siqwalasele ukungavisisani kwezopolitiko okwakugubungele ilizwe.
Okwangoku, ulindelo lwamva nje lokuba ukukhutshwa kwesitofu sokugonya kuya kuthi ekugqibeleni kuphelise ubhubhane phakathi enyakeni kuye kwaphoswa kukungaqiniseki. Utshintsho olutsha lwentsholongwane, ukusasazeka kokugonya kwezitofu zokugonya, kunye nobungqina obuchithakeleyo bemicimbi malunga nokusebenza kwezitofu zokugonya konke oku kongeza kwinkxalabo ekhulayo ethwaxa imarike.
EJamani, ukusweleka okunxulumene no-Covid kuye kwafikelela kwinqanaba eliphezulu, njengoko ilizwe laxela ukusweleka kwe-1500 kwiiyure nje ezingama-24 ezidlulileyo. Kuyo yonke iYurophu, ngakumbi e-UK, amaziko ezempilo oluntu afikelele kwinqanaba eliphezulu kwaye aphantsi koxinzelelo lokuvuma ngaphezulu.
Oko kwathiwa, iJamani inokuhamba ne-UK ekwandiseni izithintelo zokutshixa ukuphela kwekota yokuqala ubuncinci. Idatha yokuhamba kukaGoogle ibonisa ukuba imisebenzi kwilizwekazi liphela yehle kakhulu ekuqaleni konyaka omtsha.
tags Dax, DE30EUR, iindaba